MASUUL DHINAC WALBA UGA MUDAN SOOMALIYA | gobolada.com
Sep 21, 2019 - jawaab
Mas’uulka dhinac walba ugu mudan Soomaaliya.
Reporter WeriyeSeptember 21, 2019 10:03 am 0
Galwareed-Doorashadii kadhacdey dalka 2017, taas oo lagu soo dhisey Dowlada uu hogaamiyo Mudane Maxamed Cabdullahi Farmaajo, ayaa waxaa ay soo martey labo marxaladood oo kala duwan kuwaas oo kala ahaa
Marxaladii 1aad DF oo heshey tageero shacab xoog badan iyo marxaladii 2aad oo Dowlada Mucaarado lakulantey.
Hadaba dulucda qoramadeyda ma ahan in aan is bar bardhig ku sameeyo labada marxaladood ee waxaan rabaa in aan iftiimiyo arin shacabiga soomaaliyeed dhegahooda ku soo noqoqotey taas ah in;
hadii madaxda Qaranka la amaanayana toos ayaga loo amaano, hadii ladhaliilayana dhaliisha lagu soo lifaaqo muwaadin aan heynin xil sare balse laga yaabo in uu kudhow yahay madaxda qaranka.
Fahad yaasiin Xaaji Daahir oo ah Teliyaha Nabad Sugida iyo Sirdoonka Qaranka Soomaaliya ayaa noqonaya muwaadinka ugu dulqaadka badan Madaxda maanta Joogta.
Akhriste ii dulqaado daqiiqad si aan kuu deeqsiiyo sababta aan udhahy hadalkaan.
Doorashadii madaxweyne Farmaajo waxaa kadhashey isa soo baxyo lagu taageerayey guusha madaxweyne farmaajo waxaana guusha kashaqeeyey Fahad Yaasiin oo saxiib dhow la ah madaxweyne Farmaajo.
Inta taageerada socotey lama maqlin magaciisa, guusha shacabkana isagaa horseed u ahaa, hase ahaatee markii mucaarad waxdhaliila soo baxey waxaa durba bilaabatey in loo saariyo wixii dhaliil ah oo ay dowlada sameyso amaba lagu eedeeyo.
Hadaba su’aasha is weydiinta mudan waxey tahay maxaa muwaadinkaan loo qariyey magaciisa intii taageerada loo haayey madaxda dowlada, markii dhaliisha lagaareyna magaciisa loo isticmaaley maxaa yeeley ma ahan madaxweyne mana ahan raisul wasaare ama raisul baarlamaan.
Waxaa hubaal ah sababta loo dhaliilo in ay tahay dadnimadiisa iyo wax qabadkiisa keliya.
Waxaana dhaliisha sameeyey koox dano gaar ah ka rabta ama uquuri waayey mansabka uu haayo amaba u arka in uu qatar ku yahay mustaqbalkooda siyaasadeed.
majirto sabab kale maxaa yeeley kamid mahan madaxda ugu sareysa dalka, dadka qaar ayaa dhihi kara hadalkiisa ayey maqlaan madaxda qaranka balse taas dhaliil mahan ee waa karti uu dheeryahay dadka in lagu bogaadiyo ayuuna mudanyahay waana arin qofkasta ku riyoodo.
Maxaa yeeley cidkasta wey jeclaan leheed in madaxda war ka qaadato balse madhacdo sidaa darteed madaxda qaranka ayaa warkiisa qaadatee waan dhaliileyaa sax ma ahan waxaana ladhihi karaa waa xaasidnimo.
Si dowladnimada uwaarto waxaa muwaadiniinta soomaaliyeed la gudboon in xilka kula xisaabtamaan madaxda xilkaas haye ee aan laga hoos bixin oo muwaadin bari ah oo waxba galabsan afka loo gelin si ay dhaliilaan.
Waa xaq dastuuri ah in muwaadinkasta ladooran karo ama waxdooran karo wuxuuna kamid yahay muwaadiniinta soomaaliyeed ee xaqa u leh hogaanka dalka sidaa darteed danbi iyo dhaliil loogama dhigi karo hebel baad lashaqeysaa.
Madhahaayo qalad malahan wuu qaldami karaa, laakiin qaladkiisa ayaa lagu dhaliili karaa ee qalad kale looma saarinnkaro
Wax aqoon ah uma lihi shakhsi ahaantiisa balse waxaa igu kalifey qoramadan sida muwaadinkaan wax looga sheego iyo sida uu u afgaaban yahay oo uga gaabsado.
Siyaasiyiin badan oo xil culus soo qabtey ama haya ayaa durba ujawaaba cidii wax kasheegta balse masuulkaan 3 sano ayaa ladhaliilayaa welina uma jawaabin dadkii wax kasheega ama ku been abuurta.
Hadaba si ixtiraamka iyo xishoodka soomalida dhexdeeda ugu dhamaan ayaan jecleestey in aan u hadlo muwaadinkaan kaxishoodey in uu iska difaaco dhaliilaha dadka wax magaradka ah.
Si madaxdeena xishoodka u bartaan waxaa nala gudboon in aan difaacno kuwa ka xishooda in ay isdifaacaan haba ladulmiyee hadii ladoono.
Dowlada dhaliil wey yeelankartaa balse dhaliisha cida quseyso ayaa haboon in lagu dhaliilo.
Waxaan u baahanahay Madax sida Muwaadinkaan u edeb Badan una dulqaad badan